दिउँसो सुत्ने बानी: फाइदा कि बेफाइदा ? – Pahilo Page
दिउँसो सुत्ने बानी: फाइदा कि बेफाइदा ?
२३ जेष्ठ २०७९, सोमबार १०:३० 5788 पटक हेरिएको
दिउँसो सुत्नु राम्रो हो वा नराम्रो प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ। तर, यो हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो। अनुसन्धानमा के देखिएको छ भने, दिउँसो सुत्दा अल्छी हुने होइन बरु ताजगी महसुस हुन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत वृद्धि हुन्छ।
किन सुत्ने दिउँसो ?
प्राय मानिसहरुको राती सुत्ने र दिनभर काम गर्ने बानी हुन्छ। तर, केही मानिसहरुको भने दिँउसो पनि केही समय सुत्ने बानी हुन्छ।
दिउँसो सुत्ने बानी भएका मानिसहरुलाई बिहान खाना खाइसकेपछि सुत्न मन लाग्छ। काम गर्दागर्दै उनीहरुलाई अल्छी लाग्छ र निदाउने गर्छन्।
यस्तो बानी भएका मानिसहरुलाई दिउँसो थकान महसुस हुन्छ र निन्द्रा लाग्न थाल्छ। दिउँसो सुत्ने मानिसहरुलाई धेरैले अल्छीको संज्ञा दिन्छन्।
त्यस्तै दिउँसो सुत्ने बानीलाई लिएर हरेकको मनमा दिँउसोको निन्द्रा राम्रो हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि तपाईं पनि आफ्नो दिउँसो सुत्ने बानीबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने बुझिराख्नुहोस् यो नराम्रो बानी होइन बरु धेरै राम्रो बानी हो।
दिँउसो सुत्ने बानीसँग जोडिएका तथ्यहरुः
१. दिउँसोको निन्द्राले अल्छीपना भगाउँछ
दिउँसो सुत्ने मानिसहरु माथि युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाका शोधकर्ताले गरेको एक शोधमा यो बानीले अल्छीपना भगाउने तथ्य पत्ता लगायो। शोधको नेतृत्व गरेका मासाइकोलोजीका असिस्टेन्ट प्रोफेसर फिलिपका अनुसार यसले अल्छीपना टाढा गर्नेमात्रै नभई मानिसको समग्र कार्यक्षमता र रोग प्रतिरोधक क्षमता पनि मजबुत बनाउँछ।
जो मानिस दिउँसोको समयमा सुत्छन् उनीहरुमा मुटु रोग लाग्ने खतरा अन्य मानिसहरुको तुलनामा कम हुन्छ।
२. मानसिक थकान टाढा हुन्छ
जो मानिस दिउँसोको समयमा १५-३० मिनेट निदाउँछन् उनीहरुको अल्छीपना टाढा हुन्छ। त्यस्तै तनाव वा मानसिक थकानलाई टाढा गर्न चाहनुहुन्छ भने दिउँसो ९० मिनेट निदाउनु राम्रो हुन्छ।
३. व्यायामपछि तुरुन्त नसुत्नुहोस्
दिउँसो सुत्ने मानिसहरुमाथि भएको एक शोधमा वर्क आउटपछि तुरुन्त सुत्नु राम्रो कुरा नभएको कुरा पनि अगाडि आएको छ । किनभने व्यायामपछि दिमागले तिव्र रुपमा काम गर्न थाल्छ। जस कारण निद्रा र थकान महसुस हुन्छ तर स्वस्थ रहनको लागि व्यायाम गरेको कम्तीमा २ घन्टापछि सुत्नुपर्छ।
४. निन्द्रा लागेपछि मात्रै सुत्नुहोस्
यदि दिँउसोको समयमा निन्द्रा महसुस भइरहेको छैन भने सुत्नु हुँदैन। यसले कुनै फाइदा मिल्दैन त्यसैले यो कुरालाई सँधै ध्यान दिनुहोस्।
मानिसलाई दिनमा कति निन्द्रा आवश्यक छ
आम रुपमा हरेक मानिसलाई एक दिनमा ७-८ घन्टाको निन्द्राको आवश्यकता हुन्छ भन्ने गरिन्छ। तर, यसको लागि कुनै सामान्य नियम हुँदैन।
साना बच्चाहरुलाई शारीरिक विकासको लागि दिनमा १२ देखि १५ घन्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। ७ वर्षदेखि १३ वर्षसम्मका भन्दा ठूला बच्चाहरुको लागि ९ देखि ११ घन्टा सुत्न आवश्यक हुन्छ।
यसैगरी १४ देखि १९ वर्षका किशोरहरुलाई ८ देखि १० घन्टा निदाउन राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
वयष्क मानिसहरुको लागि ६ देखि ८ घन्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ। ६ घन्टाभन्दा कम सुत्नाले भने स्वास्थ्यलाई असर गर्छ।
त्यस्तै ६० वर्ष भन्दा धेरै उमेरका मानिसहरुको लािग सामान्य भन्दा धेरै घन्टा सुत्न आवश्यक हुन्छ। यो उमेरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कैयौं किसिमका समस्याहरु आउँछन्। थकान वा मानसिक तनावलाई टाढा गर्नको लागि १० देखि १२ घन्टा वा अझै यस भन्दा धेरै निदाउन सकिन्छ। एजेन्सी